Verbiage nke ndị mmadụ na-eji na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịme mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu gbasara nkpado na ịde blọgụ, ị nwere ike ịpụta ịhọrọ okwu ndị dị mkpa na edemede ahụ mkpado ya ma mee ka ọ dị mfe ịchọ na ịchọta. Njikwa mkpado bụ teknụzụ na azịza dị iche iche. N'uche nke m, Echere m na ọ bụ emezighituri aha ya ... it's ma ọ ghọọ ndị nkịtị okwu ofụri ụlọ ọrụ otú anyị ga-akọwa ya!
Nkpado saịtị na-agbakwunye ụfọdụ mkpado edemede n'isi, ahụ, ma ọ bụ n'okpuru nke saịtị. Ọ bụrụ na ị na-agba ọtụtụ nyiwe nchịkọta, ọrụ nyocha, nsụgharị ntụgharị, ma ọ bụ ụfọdụ sistemụ ọdịnaya dị egwu ma ọ bụ nke ezubere iche, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile ka ịchọrọ ịdebanye ederede n'ime ndebiri isi njikwa ọdịnaya gị. Usoro njikwa Tag (TMS) na-enye gị otu edemede iji tinye n'ime template gị wee nwee ike ijikwa ndị ọzọ niile site na ikpo okwu nke atọ. Sistemụ njikwa njikwa na-enye gị ohere ịwuwu igbe ebe ị nwere ike iji amamihe hazie mkpado ịchọrọ ịhazi.
A na-akwado usoro njikwa Tag netwọk nnyefe ọdịnaya ndị bụ incredibly ngwa ngwa. Site na ịrịọ otu arịrịọ maka ọrụ ha wee tinyezie ederede n'ime saịtị gị, ịnwere ike belata oge ibu ma kpochapụ ohere saịtị gị ga-ajụ oyi ma ọ bụrụ na ọrụ ahụ anaghị agba ọsọ. Nke a ga - abawanye ọnụego ntụgharị ma nyere gị aka njikarịcha njin ọchụchọ gị.
Nke a bụ nnukwu nnyocha nkọwa nke top 10 uru nke mkpado njikwa maka dijitalụ ahịa si Nabler.
Tealium iQ - Tealium iQ na-enyere ndị otu aka ijikwa ma jikwaa data ndị ahịa ha na ndị na-ere MarTech gafee weebụ, ekwentị mkpanaaka, IoT, na ngwaọrụ ejikọrọ. Onwe ya na ihe ilekota nke over 1,300 turnkey na-ere ihe njikọta enyere site na mkpado na API, ị nwere ike iwepụta ma jikwaa mkpado ndị dị mfe, nwalee teknụzụ ọhụrụ, na n'ikpeazụ weghara nchịkọta teknụzụ ahịa gị.
Tags: adobe ahụmahụ igwe ojiiAdobe ahụmahụ n'elu ikpo okwuadobe launchingAdobe Managerileba anyaenterprise njikwa njikwaonye njikwa aha njirimara enterprisenjikwa faili googlenjikwa mkpadonyiwe njikwa njikwasistemụ njikwa njikwatealium iqtms